तेजबहादुरलाई मा र्न खोजेको थिएँ, प्रमाण मेटाउन देख्नेजति सबैलाई सिध्याएँ – Classic Khabar
संखुवासभा सामूहिक ह त्या प्रकरणमा संलग्न आरोपमा एक जना नाता पर्ने भतिज पक्राउ परेका हुन् । ह त्या भएको पाँच दिनपछि प्रहरीले सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका–१ स्थित सामूहिक ह त्याका ण्डका आरोपी लोकबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेको हो ।
Prevकरिब एक बर्ष अघिको त्यो घटनाले लिएको रहेछ अहिले ६ जनाको ज्यान , के थियो त्यो घटना? यस्तो सम्म पो भएको रहेछ !
Nextपक्राउ परेका भतिजको बयान : धेरै ह्यापे त्यसैले सिकिदिए
पाथिभरा माताको दर्शन गर्दै, हेर्नुहोस भाद्र ११ गतेको राशिफल